11 Ụwa niile wee na-asụ otu asụsụ, nweekwa otu usoro okwu. 2 O wee ruo ka ha nọ na-aga n’ebe ọwụwa anyanwụ na ha mesịrị hụ otu ndagwurugwu* n’ala Shaịna,+ ha wee biri n’ebe ahụ. 3 Ha wee malite ịgwa ibe ha, sị: “Ngwanụ! Ka anyị kpụọ brik, nụọ ya n’ọkụ.” Ha wee jiri brik mere nkume, ma ha ji bitumen mere ụrọ.+ 4 Ha wee sị: “Ngwanụ! Ka anyị wuoro onwe anyị obodo na ụlọ elu nke elu ya ga-eru n’eluigwe,+ ka anyị meekwara onwe anyị aha na-ewu ewu,+ ka anyị wee ghara ịgbasa n’ebe niile n’ụwa.”+ 5 Jehova wee gbadaa ka ọ hụ obodo ahụ na ụlọ elu ahụ ụmụ mmadụ wuru.+ 6 E mesịa, Jehova sịrị: “Lee! Ha bụ otu ndị, ha niile na-asụkwa otu asụsụ,+ nke a bụkwa ihe ha malitere ime. Ugbu a, ọ dịghị ihe ha bu n’obi ime nke ha na-apụghị ime.+ 7 Ngwa! Ka anyị+ gbadaa ghagbuo+ asụsụ ha n’ebe ahụ ka ha wee ghara ịnụ asụsụ ibe ha.”+ 8 Jehova wee mee ka ha si n’ebe ahụ gbasaa n’elu ụwa dum,+ ha wee kwụsị iwu obodo ahụ.+ 9 Ọ bụ ya mere e ji kpọọ ya Bebel,+ n’ihi na n’ebe ahụ ka Jehova ghagburu asụsụ ụwa dum, Jehova mekwara ka ha si n’ebe ahụ gbasaa+ n’ebe niile n’elu ụwa. 10 Nke a bụ akụkọ banyere Shem.+ Shem gbara otu narị afọ mgbe ọ mụrụ Apakshad,+ afọ abụọ mgbe iju mmiri gasịrị. 11 Mgbe Shem mụsịrị Apakshad, ọ dịrị ndụ narị afọ ise. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom.+ 12 Apakshad dịrị ndụ afọ iri atọ na ise. O wee mụọ Shila.+ 13 Mgbe Apakshad mụsịrị Shila, ọ dịrị ndụ narị afọ anọ na atọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 14 Shila dịrị ndụ afọ iri atọ. O wee mụọ Iba.+ 15 Mgbe Shila mụsịrị Iba, ọ dịrị ndụ narị afọ anọ na atọ. N’oge a, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 16 Iba wee dịrị ndụ ruo afọ iri atọ na anọ. O wee mụọ Pileg.+ 17 Mgbe Iba mụsịrị Pileg, ọ dịrị ndụ narị afọ anọ na iri atọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 18 Pileg wee dịrị ndụ ruo afọ iri atọ. O wee mụọ Riu.+ 19 Mgbe Pileg mụsịrị Riu, ọ dịrị ndụ narị afọ abụọ na itoolu. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 20 Riu wee dịrị ndụ ruo afọ iri atọ na abụọ. O wee mụọ Sirọg.+ 21 Mgbe Riu mụsịrị Sirọg, ọ dịrị ndụ narị afọ abụọ na asaa. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 22 Sirọg wee dịrị ndụ ruo afọ iri atọ. O wee mụọ Nehọ.+ 23 Mgbe Sirọg mụsịrị Nehọ, ọ dịrị ndụ narị afọ abụọ. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 24 Nehọ wee dịrị ndụ ruo afọ iri abụọ na itoolu. O wee mụọ Tira.+ 25 Mgbe Nehọ mụsịrị Tira, ọ dịrị ndụ otu narị afọ na iri na itoolu. N’ime oge ahụ, ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. 26 Tira wee dịrị ndụ ruo afọ iri asaa, e mesịa, ọ mụrụ Ebram,+ Nehọ+ na Heran. 27 Nke a bụ akụkọ banyere Tira. Tira mụrụ Ebram, Nehọ na Heran; Heran wee mụọ Lọt.+ 28 E mesịa, Heran nwụrụ ka ya na Tira nna ya nọ n’ala a mụrụ ya, n’obodo Ọọ+ nke ndị Kaldia.+ 29 Ebram na Nehọ wee lụrụ ndị inyom. Aha nwunye Ebram bụ Seraị,+ aha nwunye Nehọ abụrụ Milka,+ ada Heran, bụ́ nna Milka nakwa nna Iska. 30 Ma Seraị bụ nwaanyị aga;+ ọ mụtaghị nwa. 31 E mesịa, Tira kpọọrọ Ebram nwa ya nakwa Lọt, nwa nwa ya,+ bụ́ nwa Heran, nakwa Seraị+ bụ́ nwunye nwa ya, bụ́ nwunye Ebram nwa ya, ha na ya wee si n’obodo Ọọ nke ndị Kaldia pụọ gawa ala Kenan.+ Ka oge na-aga, ha bịarutere Heran+ wee biri n’ebe ahụ. 32 Ụbọchị Tira dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ abụọ na ise. Tira wee nwụọ na Heran.